लेख एक वृद्धि घन्टी, यो गठन कसरी, कहाँ यो पाउन सकिन्छ, के विज्ञान छल्ले अध्ययन गरिएको बताउँछन्।
रूखहरू र जीवन
हाम्रो ग्रहमा जीवन गठन भएको थियो र धेरै कारक धन्यवाद अवस्थित, र तिनीहरूलाई एक - माहौल को एक उपयुक्त ग्याँस संरचना छ। थप विशेष, पर्याप्त अक्सिजन को उपस्थिति। तिनीहरूले हामीलाई सबैभन्दा जीवित प्राणीहरू द्वारा exhaled कार्बन डाइअक्साइड अवशोषित जो बिरुवाहरु, प्रदान गर्नुहोस्। हाल अधिकांश विकसित र सभ्य देशहरूमा कडाई राष्ट्रिय पार्क, जहाँ तपाईं एक धेरै पुरानो रूखहरू पूरा गर्न सक्छन् सिर्जना सहित आफ्नो वनको राज्य निगरानी। तिनीहरूले दृश्य को एक सौंदर्य बिन्दुबाट, तर पनि वैज्ञानिकहरू पछिल्लो पटक को ज्ञान तिनीहरूलाई अन्वेषण छन्, र रूखहरू उमेर रूख छल्ले प्रयोग गरेर निर्धारण गरिन्छ तथ्यलाई द्वारा मात्र होइन रोचक छन्। तर वार्षिक घन्टी, यो गठन किन र कहाँ बाहेक रूखहरू छन् के हो? यसो हामी बुझ्न, र यस लेखमा।
वार्षिक वृद्धि छल्ले, वा वार्षिक पत्रहरू, क्षेत्र cyclical उदाहरण, Fungi र mollusks लागि बिरुवाहरु मा Tissues को विकास र जीवित जगतले केही अन्य प्रजाति, भनिन्छ। आफ्नो उपस्थिति तापमान वा अन्य कारक मा climatic परिवर्तनहरू कारण हो। अब हामी के वार्षिक घन्टी थाहा छ।
तर वुडी बारहमासी बोट प्रकार अवलोकन सबैभन्दा विशेषता र उच्चारण वृद्धि छल्ले। विशेष गरी कि समशीतोष्ण अक्षांश बढ्न ती, को cambium को गर्मी र वसन्त वृद्धि को अवधि वर्ष को शरद ऋतु र हिउँदमा बाँकी समय संग alternated गर्दा। गाढा र हल्का: हामी छल्ले को उपस्थिति कुरा भने, प्रत्येक जो दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। Conifers पछि गठन गर्ने काठ एक खास गाढा छाया छ देखि, सबै भन्दा स्पष्ट देखेका छन् किनभने आफ्नो वार्षिक छल्ले को चासो को हो। अब हामी के वार्षिक घन्टी थाहा छ। आफ्नो अध्ययन dendrochronology रूपमा विज्ञान संलग्न।
Dendrochronology - यो डेटिङ घटनाहरू, प्राकृतिक घटना र काठ वा ती छ कि अन्य जैविक रहलपहल को रूख छल्ले को अध्ययन बाट पुरातात्विक निष्कर्ष संग गर्नुहुन्छ कि एक वैज्ञानिक अनुशासन छ।
उदाहरणका लागि, विधि सबैभन्दा सामान्यतः प्रयोग को उमेर निर्धारण वार्षिक छल्ले केही वस्तुहरू वा काठ को भवनहरु।
विज्ञान कस्तो साथ हामी बुझे के गरिरहेका छन्। अब कसरी वार्षिक छल्ले गठन गर्ने हेरौं।
हामीले देख्यौं, तिनीहरूले एक उच्चारण seasonality संग क्षेत्रमा कि बढन रूखहरू देखा। बस गर्मी मा, राख्न र हिउँदमा तिनीहरूले तापमान र अन्य अवस्थामा परिवर्तन गर्न उत्तिकै कारण बढ्न छैन। रंग, घनत्व, बनावट, आदि: यो काठ को एक तह, जाडो बढ्दै, गर्मी जनसंचार विशेषताहरु फरक छ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ हामी दृश्य प्रकटीकरण कुरा भने पार कटौती देखे रूख ट्रंक concentric छल्ले को आकार भएको, स्पष्ट संरचना देख्न सकिन्छ।
जो वृद्धि छल्ले द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन?
मूलतः - यो उमेर हो। प्रत्येक घन्टी, एक वर्ष पारस्परिक यसको मोटाइ र बनावट त्यसपछि दृश्य को climatic बिन्दुबाट एक वर्ष के थियो मा न्याय गर्न सकिन्छ अनुसार: अनुमानित तापमान, वर्षा, आफ्नो आवृत्ति, र यति मा। केही प्राचीन काठ उत्पादनहरु को उमेर निर्धारण लागि यो विधि प्रयोग: तिनीहरूले जसको उमेर ज्ञात छ नमूना, संग तुलना sawed छल्ले को संख्या मा हेर्न र त्यसपछि। यसरी, यो थियो जब तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूख, तल कटौती विषय लागि सामाग्री रूपमा सेवा जो।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, वार्षिक छल्ले मात्र होइन रूखहरू तर पनि पशु संसारमा छन्। तपाईं लगातार बढ्न जो ती Tissues वा संरचना को कंकाल को, तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ, तर यो तापमान मा जलवायु, मौसमी परिवर्तनको प्रभाव susceptible छ। यो मात्रा, चरा, पशु, सीङ, हड्डी, केही स्तनधारी को हड्डी र माछाको केही प्रजाति को पंख, विभिन्न प्रकारका beaks को mollusk गोले र हड्डी। त्यसैले अब हामी के जीव मा रूख छल्ले थाहा छ। उहाँलाई अनुसार, वैज्ञानिकहरूले सबै नै, पेड को उमेर को मामला मा जस्तै, अवधि को विशेष गरी जलवायु र यति मा निर्धारित।
चन्द्र जमीन किन पर्दैन? विस्तृत विश्लेषण
मानव शरीर सन्तुलन कहाँ छ
प्ले "तल्लो गहिराइमा" गोर्की को हीरो: विशेषता, चित्र र भाग्य
लेखापरीक्षक - यो ... अर्थ र शब्द को मूल
महिला मा गोप्य भन्ने कुराहरू: "गोप्य" रूपमा वर्गीकृत
नियम र परिवार नियम। परिवारका सदस्यहरूको सर्तहरू
अर्थ लोकप्रिय उद्धरण (छोटो)
ठेकेदार, ठेगाना, निदेशक, प्रदर्शनी
भुट्नु, "Futurama": वर्ण जीवनी
कार्यक्रम स्काइप मा आवाज कसरी परिवर्तन गर्छ?